२०७७ कार्तिक ६ बिहीबार ०२:४३:००
कूटनीतिज्ञ भन्छन्– ‘गुप्तचरका मुखिया एयरफोर्सको जहाज चढेर नेपालका प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आएका छन्, देश कूटनीतिक रूपमा धराशायी भएको अवस्था हो । राष्ट्रवादी र देशभक्त नागरिकका लागि योभन्दा लज्जाको विषय केही हुन सक्दैन, देशको शिर झुकेको छ ।’
अपरेसनमा आइएफसी ४६२० : भोटर आइडी कार्ड देखाएर अध्यागमनबाट भित्र आए गुप्तचर प्रमुख
गुप्तचर हाकिमको जहाज आउन लागेको जानकारी पर्यटन मन्त्रालयले बुधबार बिहान मात्रै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विमानस्थल कार्यालयलाई जानकारी गराएको थियोे । आइएफसी ४६२० कलसाइनको जहाज बुधबार १ बजे काठमाडौं अवतरण गर्ने र बिहीबार बिहान ९ः४५ बजे फर्कने गरी फ्लाइट प्लान छ । गुप्तचरका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनमा परिचयपत्रको रूपमा भोटर आइडी कार्ड देखाएका थिए । त्यस्तै, उनीसँगै आएका अरुण जैनले अर्डिनरी पासपोर्ट प्रस्तुत गरेका थिए ।
छिमेकी भारतसँग कूटनीतिक र राजनीतिक वार्ता गर्नुको सट्टा सरकारले भारतीय गुप्तचर प्रमुखलाई स्वागत गरेको छ । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको टोली नेपाल आएर प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई भेटेको छ ।
भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल
जब कि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको नेपाली भूमि नेपाली नक्सामा समेटिएको छ, तर त्यो क्षेत्रमा अहिले पनि भारतीय फौज छ । यस्तो विषयमा देश र संसद्को सर्वसम्मत समर्थन पाएको सरकारले भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुख बोलाएर प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग वार्ताको वातावरण बनाएको छ ।
गुप्तचरले प्रधानमन्त्रीनिवासमा न्यानो स्वागत पाउँदा दुई देशबीच हुनुपर्ने कूटनीतिक स्तर हुनुपर्ने संवाद भने रोकिएको छ । कोभिड– १९ को महामारीका कारण भन्दै भारतले वार्ता सार्दै आएको छ । महामारी मत्थर भएपछि भारतीय विदेशसचिव हर्षबर्द्धन शृंगलाको नेपाल भ्रमण हुने भनिएको छ ।
‘नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध सुधार्न परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्ता सुरु गर्नुको विकल्प केही हुन सक्दैन, यसका लागि सकारात्मक पहलकदमी लिनुपर्छ,’ परराष्ट्रविद् एवं पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
भारतले गत वर्ष १६ कात्तिकमा जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेपछि नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाउँदै वार्ताका लागि आग्रह गरेको थियो । नेपालले ४ मंसिरमा पत्र पठाएको थियो । भारतलाई पठाएको पहिलो चिठीमा विदेशसचिवस्तरीय बैठक कहिले बस्न उपयुक्त होला भन्ने जिज्ञासा राखिएको थियो । तर, भारतले कुनै ‘रेस्पोन्स’ नगरेपछि नेपालले एक सातापछि दोस्रो पत्र पठाएको थियो । दोस्रो पत्रमा भने नेपालले दुईवटा वैकल्पिक मिति प्रस्ताव गरेको थियो । पत्रमा पहिलो मिति डिसेम्बर पहिलो साता (मंसिर १६ देखि २३)का कुनै पनि दिन भनिएको थियो भने यसमा सम्भव नभए डिसेम्बर तेस्रो साता (मंसिर ३० देखि ६ पुस)को कुनै दिन वार्तामा बस्न नेपाल तयार भएको उल्लेख थियो ।
नेपालले दोस्रो चिठी पठाएको एक महिनासम्म भारतले कुनै जवाफ पठाएन । ‘उसले हाम्रो सरोकार र संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेको हो । हामीले वार्ताका लागि प्रस्ताव गरेको मिति गुज्रिसकेपछि मात्र जवाफ आयो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् । भारतले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न तयार रहेको औपचारिक जवाफ मात्रै पठायो, मितिबारे केही उल्लेख गरेको थिएन ।
तत्कालीन परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले भारतका नयाँ विदेशसचिव हर्षबर्द्धन शृंगलालाई पठाएको बधाई सन्देशमा परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्ताबारे स्मरण गराएका थिए । त्यस्तै, राजदूत नीलाम्बर आचार्यले उनलाई भेटेर पनि यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, यसमा अहिलेसम्म ठोस जवाफ आएको छैन ।
विदेशसचिव शृंगलाले पहिलो चरणमा भुटान, बंगलादेश र अफगानिस्तानको भ्रमण गरे, उनी फेरि बंगलादेशको भ्रमणमा पनि निस्किए । तर, नेपाल आउने मिति तय भएन । ‘उनीहरू संसार घुमेका छन्, वार्ता गरेका छन् । तर, नेपालले स्मरण गराउँदा कोभिड छ भन्छन् । कोभिडबीच विदेशसचिव आउन नमिल्ने, गुप्तचरका हाकिम भने आउन मिल्ने ? यसमा हाम्रो कूटनीतिक ओज निकै खस्किएको देखियो,’ परराष्ट्रका अधिकारीले भने । नेपालले भर्चुअल माध्यमबाट भए पनि वार्ता गरौँ भन्ने प्रस्ताव पठाउँदा पनि भारतले बेवास्ता गरेको छ ।
यता, लिम्पियाधुरा समेटिएको पुस्तक वितरण रोकिएको छ
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर तयार पारिएको नक्सा समावेश भएको पुस्तक वितरण सरकारले नै रोकेको छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा नौदेखि १२ सम्मका विद्यार्थीका लागि यो प्रकाशन गरेको हो, तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनपछि यो पुस्तकको वितरण रोकिएको हो ।
भारतले ५९ वर्षदेखि अतिक्रमण गरेको भूभाग नेपाली नक्सामा समेट्न सार्वभौम संसद् एकजुट भएको थियो । तर, नेपालको संविधानमै समेटिएको नक्सा भएको पुस्तक बालबालिकालाई पढाउने विषयमा भने सरकार द्विविधामा परेको छ । त्यो किताब वितरण नगर्नू भनेर प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन आएको खुलासा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गरेका हुन् ।
‘किताब वितरण रोक्नुस् भनेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मै भन्नुभयो, अब परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसहित छलफल गर्छौँ । अन्तरमन्त्रालय छलफल गरेर स्पष्ट पार्छौँ,’ उनले ६ असोजमा शिक्षा पत्रकारहरूसँग भनेका थिए ।
नेपाल सरकारले ५ जेठमा नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । त्यस्तै, ३१ जेठमा प्रतिनिधिसभाले र ४ असारमा राष्ट्रिय सभाले नयाँ नक्सासहितका निसान छापलाई मान्यता दिन संविधान संशोधन गरेका थिए । ‘संविधान नै संशोधन भएकाले अब कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूमि हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । देशको संविधानमा भएको नक्सा नेपालका बालबालिकाले पढ्न किन नपाउने हो, प्रधानमन्त्रीबाटै किन यस्तो निर्देशन आयो ? हामी आश्चर्यमा परेका छौँ,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
१९ असार ०७७ मा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले विद्यालय तहमा सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रयोग हुने गरी स्वीकृत दिएको थियो । पुस्तक तयार भएपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गरेका थिए ।
कालापानीबारे नेपाल अरूको इसारामा बोल्यो भन्ने सेना प्रमुख नरवणे १८ कात्तिकमा आउँदै
नेपाली भूमि मिचेर भारतले बनाएको सडकको नेपालमा तीव्र भएपछि त्यसलाई चिनियाँ इसारामा भएको दाबी गर्ने भारतीय सेनाध्यक्ष मणिमुकुन्द नरवणेलाई नेपालमा स्वागत र सम्मानको तयारी भइरहेको छ । भारतका स्थल सेनाध्यक्ष भएपछि पहिलोपटक औपचारिक भ्रमणका क्रममा नरवणे १८ कात्तिकमा नेपाल भ्रमण आउन लागेका हुन् । उनलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ । उक्त दर्जा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदान गर्नेछिन् । तर, तिनै सेनाध्यक्ष नरवणेले राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रममा बोलेको विषयमा कठोर टिप्पणी गरेका थिए ।
भारतका स्थल सेनाध्यक्ष मणिमुकुन्द नरवणेले नेपालमा ‘अरू कसैका लागि’ लिपुलेक क्षेत्रमा निर्माण गरिएको भारतीय सडकको विरोध भएको बताएका थिए । भारतको मनोहर पारिकर इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालाइसिसद्वारा आयोजित वेविनारमा सेनाध्यक्ष नरवणेले चीनको इसारामा नेपालले विरोध गरेको सुनाएका थिए । ‘लिपुलेक सडकका सन्दर्भमा म कत्ति पनि विरोधाभास देख्दिनँ । कालीनदीभन्दा पश्चिममा हामीले सडक बनाएका छौँ । नेपालमा यसको किन विरोध भइरहेको छ, म जान्दिनँ । उनीहरूले यो विषय कसैका लागि उठाएका हुन्, यो सम्भावना म देख्छु । यो सडक करिडोरबारे विवाद छैन,’ उनको भनाइ थियो ।
#रअ # राष्ट्रवाद